ဦးသိန်းစိန်ဘက်က အပြည့်ဝလက်မထောင်ထောက်ခံပါသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Complaint / Claim » ဦးသိန်းစိန်ဘက်က အပြည့်ဝလက်မထောင်ထောက်ခံပါသည်
Posted by Wai Phyoe on Jun 11, 2012 in Complaint / Claim, Opinions & Discussion | 27 comments
မနေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန် ၈ နာရီသတင်းကြားရပြီး ကျွန်တော့်တို့ဦးသိန်းစိန်ကိုအပြည့်ဝထောက်ခံလိုက်ပါသည်။တစ်ချို့လူတစ်စုကတော့ကြိုက်ကြမည်မပာုတ်။သို့သော်ယခု Post သည်လည်း
ထိုသို့နေရာတကာကန့်လိုက်တိုက် နိင်ငံကောင်းအောင်ဘာမျှမလုပ်ပဲလုပ်သမျှအကောင်းမမြင် သူထောင်ကိုယ်ထောင်လုပ်မည့်သူများအတွက်ဖြေရှင်းချက်ပေးမည့် Post မပာုတ်။ ညီလေး…
မင်းစာများများဖတ်လို့ အာကြီးလေသံနှင့်ဆရာလုပ်မည့်သူများကိုလည်းဘာမျှ ပြန် Reply လုပ်မည်မပာုတ်သဖြင့်ကြိုတင်တောင်းပန်ထားပါရစေ။သို့သော်ကျွန်တော်ပြောချင်သည်မှာ တစ်ခွန်းတည်း
ပါ………..” လက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်ဦးသိန်းစိန်ကိုလေးစားတယ်၊ဦသိန်းစိန်ကိုထောက်ခံတယ် ” ။ အဲ့အယ့်ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်တော့်ကို ကြံ့ဖွတ်အဖွဲ့ဝင်လား စစ်ခွေးလားလို့တော့မမေးနဲ့ဗျာ့။ရှင်းရှင်းလေး
တိုတိုတုတ်တုတ်၈နာရီသတင်းမိန့်ခွန်းအပြီး ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်အမှားတွေကိုထောက်ပြသည့် ပို့စ်များ နာရီဝက်အတွင်းတက်လာသည်။ဘယ်အချိန်ကတည်းက အပြစ်တင်ဝေဖန်(critize)လုပ်ခြင်နေကြ
သည်မသိ ပို့စ်များကစက်သေနတ်အလားပစ်လွတ်နေကြသည်။ အရေးပါသည့်အချိန်တွင် အရေးမပါသည်များလက်မောင်းတန်းနေကြသည်။ ဖြစ်နေသည်များကိုလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသွားသည်အပူ
နည်းများနှင့်မပာုတ်ပဲ အအေးနည်းများနှင့်ဖြေရှင်းသွားရန်တိုက်တွန်းသွားသည်။ဒါကို တစ်ချို့က သေနတ်မသုံးရကောင်းလားမေးခွန်းထုတ်ပြီးလှောင်ကြသည်။ ဘာပဲပြောပြော ဘာမဆိုအကောင်းဖြစ်ဖြစ်အ
ဆိုးဖြစ်ဖြစ် Critize လုပ်နိင်သည့်ထိုသူများ၏ ဦးနှောက်အရည်သွေးတွေကိုတော့စလံသမိပေသည်။
ယခုလက်ရှိတွင်လည်းဖြစ်ပေါ်နေသော ရခိုင်-ကုလား အရေးခင်းတွင်လည်းတစ်ချို့လူစုက”တောက်..သောက်စစ်သားတွေကုလားတွေကိုပစ်ပါလားကွာ ရပ်ပဲကြည့်နေကြတယ်”ပာုလေဘော်နှင့်အာရိုက်
ကြသည်။ ထို့သို့စကားကို လက်လွှတ်စပယ်ပြောဆိုသူများကိုကျွန်တော် မေးခွန်းများထုတ်ချင်ပါသည်။ ” ယခုမှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကူးပြောင်းစကာလတွင်ထို့သို့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် များဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါက
ပြည်သူလူထု အေးအေးချမ်းချမ်းနှင့်ဘာလုပ်ကိုင်စားကြမနည်း? ” တစ်ချို့ကလည်း “ဖြစ်လာရင်ချကွာဆော်သာဆော် ” ထိုသို့ပြောသူများကိုကျွန်တော်အကဲခေတ်မိသလောက်ကတော့ ၁၉၀-၁၁ဝ များများပေ
သည်။သူတို့အတွက်ကအရင်ကလည်းအလုပ်မလုပ် ယခုလည်းအလုပ်မလုပ် သတ်ပွဲဖြတ်ပွဲများဖြစ်လျှင်လည်း အလုပ်မရှိသဖြင့်ဘာမျှစိုးရိမ်စရာမရှိကြသူများဖြစ်သည်။ထိုသူများကိုမေးချင်သည်မှာ” လာကြည့်
ကြစမ်းပါ ရတဲ့လစာလေးနဲ့မိသားစုကိုလုပ်ကျွေးနေရတဲ့လူငယ်တွေ အဲ့လိုသတ်ပွဲဖြတ်ပွဲတွေဖြစ်ရင် ခင်ဗျားတို့Hero ကြီးလုပ်ပြီးတာဝန်ယူထမင်းကျွေးမှာလား?”‘ ဒါကအသိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုမှာ ဖြစ်သွားနိင်တဲ့
အကျိုးဆက် (Impact) လေးပါ၊
လာပြီ နိင်ငံတော်အဆင့် (National Stage)၊ ယခုရန်ကုန်မြို့လူငယ်အများစုအတွက်အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းမှာရှားပါးလာချိန်တွင် ဦးသိန်းစိန်လမ်းစဉ်အချို့ကြောင့် Foreign Investment (နိင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်
နှံမှူများ) ကြောင့် လူငယ်အတော်များများအလုပ်လေးတွေရကာ အသက်ရှချောင်လာတာ ၂ လတောင်မပြည့်သေးပါဘူးဗျာ။ အစိုးရကဖြေရှင်းရမယ့်အချိန်မှာ ” သတ်ကြကွာချကြာကွာ” နဲ့လက်မောင်တန်းနေသူများ
များသထက်များလာလျှင်ဘယ် Investor မှလာတော့မည်မပာုတ် Company များလည်းခေါင်းကွဲမည်၊ Company ခေါင်းကွဲတာအရေးမပာုတ်ဘူး လူငယ်ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ပြုတ်တာကမှ တစ်ကယ့်နိင်ငံအရေးပါ။
ခင်ဗျားတို့ပဲ ဆင်းရဲမွဲတေရေးတွေပပျောက်ရေးတွေ လမ်းမပေါ်ထွက်အော်ခဲ့တာလေ။ အခုခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်နေချင်ကြရင်ဒီ လူငယ်တွေမျက်နှာကိုခင်ဗျားတို့မထောက်ဘူးလား။
နောက်ထပ်အဆိုးဆုံးကတော့ အင်တာနက်ပေါ်ကနေ လှော်နေကြတဲ့ကောင်တွေပါ။ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်းဘာမှမဖြေရှင်းနိင်ပဲ ဒေါသတွေထွက်ကြ အာတွေရိုက်ကြနဲ့ အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပဲဖြစ်လာရင်ရှေ့ဆုံးက
ထိလည်းမဖြစ်ပါဘူး။အားလုံးအချိန်တန်ရင်း သူ့ပာာနဲ့သူစီရင်ပြီး ပြီးသွားကြတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ယခု Case တွင် ငါစွဲဖြုတ်လိုက်ပါက နှစ်ဖက်လုံးနောက်ဆုတ်မရသောအလွန်တွေဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
ကုလားသုံးကောင်ကလည်း ရခိုင်မ ကိုရက်စက်စွာမဒိမ်းကျင့်ပြီး လည်လှီးသတ်သည်။ခင်ဗျားတို့မပြောနှဲ့ဗျာ ကျွန်တော်တောင်အဲ့ကုလားသုံးကောင်ကို ဖမ်းပြီး မသေမချင်းညှင်းသတ်ချင်သည်။ သို့သော် ဒါသည်ဖြေရှင်းနည်းမပာုတ် ဒါကိုလူတိုင်းသိသည်။ ရခိုင်များကလည်း ထိုကုလားသုံးကောင်ကို ဖမ်းပြီးသတ်လျှင် ကျွန်တော်လည်းအားပေးတယ်ဗျာ ခုတော့မပာုတ်ဘူးဘာမဆိုင်တဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ပြန်လာတဲ့ ကုလားတစ်စုကိုမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။သွားရော………… .ခုတော့ရခိုင်တွေပြေးနေကြရပြီထိုဆိုင်ကယ်များနှင့် ရခိုင်များဖင်သွားယား တာခုတော့ဘာမဆိုင်တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်ကြရသည်။ရန်ကုန်မှာပင်လျှင်
ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် ကုလားများနှင့်ဆုံပါက မျက်စိသတိထားနေရသည်။ သူတို့တွေမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ခဲ့တာ ကိုယ်တွေပါကြားကနေ ဖင်ပူရတဲ့အဖြစ်ပါ…… အဲ့တာကိုမှကြားထဲကဖင်လောင်ခံချင်ကြရင်လည်း……….. အလောင်ခံကြတော့ဗျို့………………
ညီလေစာများများဖတ်လို့ကျွန်တော့်ကိုပြောတယ့်လူတစ်ချို့မှာတကယ့်စေတနာနဲ့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိလို့ကြိုတောင်းပန်လိုက်တာပါ။ပာိုတစ်နေ့က သုညဆိုသူ လူတစ်ဦး မဲဆောက်ဘက်အခြမ်း ရပလက် တွင်တွေ့ကရလမ်းကိုဓါတ်ပုံရိုက်တင်အချက်လက်လဲမပါပဲတင်ခဲ့သဖြင့် ကျွန်တော်နှင့်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ပဲ Comment များဆွမ်းကြီးလောင်းခဲ့ရာ ” ညီလေး စာများများဖတ်လိုက်အုံးကွာ ဓါတ်ပုံထဲကနိင်ငံကမြန်မာပြည်ထက်လွတ်လပ်ရေး ၁ဝနှစ်နောက်ကျရတာ”တွေဘာတွေ ဆရာကြီးလေသံနှင့်ဝင်ညှော်သွားပါသည်။ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောလိုက်ပါဘူး ယိုးဒယားနိင်ငံ ကိုလိုနီလက်အောက်မရောက်ခဲ့တာ ၁၃ နှစ်သားကျွန်တော့ညီတောင်သိပါတယ်”အဲ့လိုမျိုး ဘာမှမသိပဲ
၁ဝ နှစ်တွေဘာတွေရမ်းသုတ်နေလျှင်မသိသူအဖို့Data အမှားကြီးရသွားလျှင် ရေးသည့်သူပဲအရှက်ကွဲပါသည်။ထို့ကြောင့်ကြိုပိတ်ထားခြင်းကို နားလည်စေလိုပါသည်။တစ်ခုခုဝေဖန်လိုပါကလည်း isamiphyo@gmail.com သို့ ပိုးစိုးပက်စက်ဝေဖန်နိင်ပါသည်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော့်ကိုစာများများဖတ်လို့ပြောလိုသူများ အချက်လက်စုံမှ ကျွန်တော့်ကိုဖဲ့ဗျ ပြီးရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစာဖတ်ကြအုံး
ဟတ်လား ငါဃဒေါ့ ခြေမထောင်ဒယ်ကွာ…. မလောက်သေးရင် လဗျွတ်ပါထောင်ဒယ်….။ ဆုတောင်းပေးလိုက်အုံးမယ်….သမဒဂျီး ကြက်မပါစေ (ခရီးထွက်တဲ့အခါ)
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အရာရာကို ချင့်ချိန်သုံးသပ်တပ်ရတယ် လို့ စဉ်းစားလိုက်ရင် အားလုံးပြီးပါတယ် ..
လူထုမြန်မာက နကိုကမှ.. Far right တွေ(ရှေးစွန်းစွဲ)တွေ များနေတာ…
အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်နဲ့.. ချွန်တွန်းလုပ်ပေးလိုက်.. တခါတည်း.. ပွဲပြတ်..။
Far right ရှေးစွန်းစွဲတွေ.. အင်အားကောင်းရင်.. ဘာဖြစ်သလည်းဆိုတာ.. ဖက်စစ်..နာဇီလိုဖြစ်တယ်..
ဒီအချက်ကို.. ဟစ်တလာက အမိအရဖမ်းယူခဲ့ဖူးတယ်..။
( ဂျီ..ဂျီဂျီး… သံချေးတက်နေပြီဖြစ်သော ဓါတ်ပြားဟောင်းဖွင့်ပြစဉ်.. စက်ညပ်၍မြည်သံ..)
သဂျီး ၊အဘနဲ အန်ကယ်သစ်မင်း တို့စာတွေကို အတွေးအခေါ် နဲ့ သဘောထား တွေကြောင့် လေးစားမိပါကြောင်း။ သဂျီးအတွက်ကုန်ကြမ်း တွေရှိတယ် စာရိုက်ပို့ခြင်းမှလွဲ၍ အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ပို့ပေးနိုင်ပါသလား …
ညီလေးကတကယ်ဘဲ ဂီတဝါသနာပါခဲ့ရင် လူငယ်တွေအတွက် အကို့ငွေတွေနဲ့ဂီတဥယျာဉ်ဆောက်ထားပါတယ် လါခဲ့ပါကွာ။
လူသားအကျိုးပြု့ဂီတဥယျာဉ် ဝ၉၅ဝ ၈၂၈၀၈
ဒါမဲ့ ……… ကိုဝေဖြိုးပြောတဲ့ ဖင်ယားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့
ဒါမဲ့ အကို့ညီမကိုကုလားကမုဒိမ်းကျင့် သတ်သွားတယ် (သဘောနော်)
ရခိုင်နဲ့ကုလားဆိုတာ လူမျိုးကွဲလေ ပြီးတော့ ကုလားက စကြောတာ ရခိုင်တွေကုလားမကို မုဒိမ်းကျင့်တယ်ဆို တာ အကိုကြားဖူးလား
အဲလိုဆိုတော့ လူမျိုးရေးနဲနဲပါသွားတယ် ပေါ့
ဒီကိစ္စမျိုးက ကိုယ်တိုင်ကြုံမှသိတာမျိုးဗျ ……….. သငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ကနာရေးကိုသွားပြီး တရားဖြေပါကွာ လို့ပြောရတာ လူကြားကောင်းပေမယ့်
ကိုယ့်အိမ်မှာနာရေးဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ တောင့်ခံနိုင်တာမှ တကယ့်ကို တရားသိတဲ့လူလို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော
နောက်ဆုံးအကိုရေးထားတဲ့ ဖင်ယားလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ရေးထားတာလေးတခုပဲဖတ်ရတာမကောင်းတာ
အဲဒါကြောင့်ပါ တက.ယ်လို့အကိုအဲလိုကုလားတွေကိုကားပေါ်မှာမြင်ယုံလေးနဲ့ ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့
ပထမဆုံး ညီလေးကိုကျေးဇူးစကားလေးပြောလိုက်ပါရစေ။မင်းကွန့်မန့်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ပို့စ်ကို အပေါ်ယံဖတ်ထားတာမပာုတ်မှန်းသိသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ညီပြောသွားတဲ့ပာာလေးတွေပေါ့။
၁။”ဒီကိစ္စမျိုးက ကိုယ်တိုင်ကြုံမှသိတာမျိုးဗျ ……….. သငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အိမ်ကနာရေးကိုသွားပြီး တရားဖြေပါကွာ လို့ပြောရတာ လူကြားကောင်းပေမယ့်
ကိုယ့်အိမ်မှာနာရေးဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ တောင့်ခံနိုင်တာမှ တကယ့်ကို တရားသိတဲ့လူလို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော”
ညီ့ပြောပုံအရဆို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့နာရေးအိမ်သွား ” ပော့ကောင်တရားနဲ့မဖြေနဲ့ လျှောတဲ့လူကလျှောသွားပြီး မင်းတို့လဲလိုက်သေလိုက်ကြ” အဲ့လိုပြောရမှာလား နောက်ပြီး ” တရားနဲ့ဖြေတာကြားကောင်းရုံသက်သက် ” ဆိုတဲ့အသုံးနှန်းလေးပေါ့ ဒါဆို မင်းပြောပုံအရဆို ကိုယ်တို့မြတ်စွာဘုရားက ” ဘယ်အရာမဆိုတရားနဲ့ကြည့် တရားနဲ့ ဖြေ “ဆိုတဲ့ သွန်သင်ချက်ကကြားကောင်းရုံသက်သက်ပဲရှိတာပေါ့နော်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေ ပောာပောာနေတဲ့ “တရားနဲ့ဖြေဆိုတာ” ရပ်ကွက်ထဲမှာကြားကောင်းရုံပာစ်နေသလိုမဖြစ်ဘူးလား ။ မင်းပြောပုံအရဆို မီးလောင်ရာ လေပင့်တဲ့ စကားတွေကမှ ကြားကောင်းရုံသက်သက်မပာုတ်ပဲလက်တွေ့ကြတဲ့စကားတွေပေါ့
၂။ “အဲဒါကြောင့်ပါ တက.ယ်လို့အကိုအဲလိုကုလားတွေကိုကားပေါ်မှာမြင်ယုံလေးနဲ့ ကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့
ဒူးထောက်တောင်းပန်သင့်တယ်” ဆိုတာလေးပေါ့ ကြည့်ရတာငါ့ညီ မျက်မှန်တပ်ဖို့လိုနေပြီနဲ့တူတယ် ကိုယ့်
ပို့စ်ထဲမှာကုလားတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးမှမပါသွားဘူး။မင်းကြည့်ရတာ သတိထား
တာနဲ့ ကြောက်တာမကွဲသေးဘူးနဲ့တူတယ် ။အခုကြည့်ကွာ လူတိုင်းလူတိုင်း မင်းကြိုက်တဲ့လူ မေးကြည့်
“အရင်လိုအေးချမ်းသေးလား” ” ကုလားတွေကိုတွေ့ရင် အရင်လို feel မျိုးပဲလား” “ကုလားတွေစုစုစုစုတွေ့
၃။ကြောက်တတ်ရင် ဒူးထောက်တောင်းပန်သင့်တယ်ဆိုတယ် ခပ်ရိုင်းရို်င်း အသုံးနုန်းလေးပေါ့ မင်းကိုအစ်ကိုဘာမှမပြောလိုပါဘူး ။ ပို့စ်ရဲ့ ပထမပိုဒ်မှာကတည်းကရှင်းပြီးသားပါ မင်းပြန်ဖတ်လိုက်ပါ ငါ့ညီ မင်းကွန့်မန်းလေးတွက်တော့ Thanks ပါ။
အကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောတာ နားလည်မှုလွဲနေတာဗျ
ပြီးတော့ ……ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုလဲ ကိုဝေဖြိုး နားလည်နိုင်မယ်မထင်ဘူး
အများအတွက် ကိုယ့်ငွေ၊ကိုယ့်ချွှေး၊ကိုယ့်သွှေးနှင့် လက်တွေ့မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့လျှင် အားလုံးကိုစိက်ဆိုးမိမှာပါ။
မိုက်တစ်လုံးနိုင်ငံရေးသမားနှင့် YCDC သိစေရန်ကို ဖွင့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
သတင်းနားထောင်ပြီးတဲ့အခါ အားလုံးကိုကြိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘင်ဂါလီရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတိုက်ရိုက်မသုံးရဲပဲသောင်းကျန်းသူတစ်စုဆိုတာကိုပဲမကြိုက်တာ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် နဲ့စစ်ဖြစ်မှာကြောက်နေတာနဲ့ သောင်ကျန်းသူတွေက ရခိုင်လိုလို ကုလားလိုုလို အထင်ခံနေရပြီ။
Fond belief Land says:
Cat mountain mountain ကြောင်ချီး
မင်းက” မလောက်သေးရင် လဗျွတ်ပါထောင်ဒယ်” ပြောရအောင်
အထင်မလွဲဘာနဲ့… တဂယ်ဒေါ့ ငါဒို့မင်းဒို့ ဘဝဃ သူတို့အဖြည့်ခံ သက်သက်ပါ။ အဖိနှိပ်ခံ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ်ဆြာ မလိုဗာဘူး။ စစ်တပ်ထဲဂမင်းတို့ သမဓဂျီး မစို့မပို့ကျွေးဒဲ့ ငပိနဲ့ကုလားပဲဟင်းစား နေတိုင်းဖက်ထိပ်အလုပ်ကြမ်း လိုက်ရသလို ငါလည်း သဂျီးပေးဒဲ့ မသထာရေစာ ပွိုင့်ဂလေးနဲ့ မက်ဒေါ်နယ်ဟမ်ဘာဂါစား ကိုကာကိုလာသောက်နေရဒဲ့ အကောင်ဗာ..။ မင်းဒို့အဗ သမဓဂျီးကို ငါပေါသလို မင်းလည်းမကျေနပ်ရင် ငါ့ဆရာ သဂျီးမင်းကို ပြန်ဆဲနိုင်ဗာဒယ်…။
Ko Par Myanmar says:
Dear Ko Wai Phyo,
I appreciate your post. You are the one with good thinking and common sense. I also appreciate for your kind respect mind in humanity.
We all are men-kind and we need to respect each other.
Life is short. Why we are going to kill each other in our surviving lives? We need peace. Not war and crime.
May this trouble end in peaceful solution. I pray.
ငါ့ညီရေ..မင်းက ပြင်ပဗဟုသုတမရှိပဲထင်ရာတွေလျှောက်မပြောပါနဲ့ ငါ့ညီ…အကိုရဲ့ ပိုစ့်ထဲက ပုံတွေက မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ကပုံတွေပါ။
ပုံလေးတွေကိုသေသေချာချာဂရုစိုက်ပြီးကြည့်ရင် မလေးစာရေးထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ငါ့ညီကို တစ်ကယ့်စေတနာနဲ့ပြောတာပါကွယ်…
ပာုတ်ကဲ့ပါ ကိုသုညေ၇………….ကျွန်တော်ဘက်ကတော့တောင်းပန်သင့်ရင်တောင်းပန်ဖို့အသင်ပါကိုသုညေ၇..မှားသွားခဲ့လိုကတော့လုံးဝဥသုံတောင်းပန်ဖို့အသင့်ပါ ကိုသုည…………….(စိတ်ရင်းနဲ့ပြောတာပါ)
၁။ အကို့ပုံမှာ ရက်စွဲ မြို့၊နိင်ငံ ဘာမှမပါဘူးဗျာ။
အယ် အဲ့လိုပြော လို ကျွန်တော်က ရမ်းတုတ်လိုက်တာ လားလို့တော့မေးနဲ့ဗျ့
၂။ ပုံတစ်ပုံ မှာ ဆိုင်းဘုတ်နီနီနဲ့ မယ်ဆောက်ဘက် ကို direction ပြထားတာတွေ့တယ်ဗျ။
တစ်ကယ်လို့ ကျွန်တော့်ဘက်ကနားလည်မှူလွဲခဲ့လို့ ကိုသုညကိုတစ်စုံတစ်ရာ စော်ကားမိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်
ဘက်ကတော့ လုံးဝတောင်းပန်ဖို့အသင့်ပါ (တကယ့်စိတ်ရင်းအမှန်နှင့်ပြောပါသည်)
၃။ နောက်တစ်ချက် ကိုသုညကိုတောင်းဆိုချင်တာလေးရှိပါတယ် ကိုသုညရဲ့ comment ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်
စီနီယာ ဂျူနီယာနဲ့နဲ့ခွဲခြင်သလိုပဲဗျာ မလုပ်ပါနဲ့ မကောင်းပါဘူး ဂေဇက်တစ်ခုလုံးက Family လိုနေကြ
တာပါ ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ဘက်က အောက်ကြို့ခံပြီး တောင်းဆိုတယ်လို့ သတ်မှတ်နိင်ပါတယ်။
ကိုဝေဖြိုး ခင်ဗျာ…အစ်ကို အနေနဲ့ ဝေဖန်မယ်ဆိုလည်း သေချာလေ့လာ
သင့်ပါတယ်.. စီနီယာ ဂျူနီယာ ခွဲခြားခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ဒီမှာ အနေ
ကြာလာလို့ရှိရင် ဘယ်သူက ဘာဆိုတာ အထာလေးတွေ သိလာပါလိမ့်
မယ်..ခု ကိုသုည ရဲ့ ပိုစ့်က ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံမှာ Masuk ဆိုတာ
ယိုးဒယား နိုင်ငံ မဲဆောက် မြို့ကို ညွှန်းတာ မဟုတ်ပါ..အဲဒီ Masuk
က အင်ဒိုစကားပါ.. ထားပါတော့ မဲဆောက်မြို့ အကြောင်း ဝီကီမှာ
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအစွဲများ မပါပဲ တိုင်းပြည်ငြိမ်းအေးဖို့အတွက် ပြောကြားသွားခဲ့တဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ မိန့်ခွန်းကို လေးစားစွာထောက်ခံလိုက်ပါသည်။
ရခိုင်များကလည်း ထိုကုလားသုံးကောင်ကို ဖမ်းပြီးသတ်လျှင် ကျွန်တော်လည်းအားပေးတယ်ဗျာ ခုတော့မပာုတ်ဘူးဘာမဆိုင်တဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ပြန်လာတဲ့ ကုလားတစ်စုကိုမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။သွားရော………… .ခုတော့ရခိုင်တွေပြေးနေကြရပြီထိုဆိုင်ကယ်များနှင့် ရခိုင်များဖင်သွားယား တာ
ဆိုတဲ့စာကြောင်းမှာ …ပို့စ်ရှင်ရဲ့သဘောကို ကောက်နုတ်ရရင်.မတရားမှုကို လက်မခံတဲ့သဘော…
ရခိုင်များကလည်း ထိုကုလားသုံးကောင်ကို ဖမ်းပြီးသတ်လျှင် ကျွန်တော်လည်းအားပေးတယ်ဗျာ …….
ပို့စ်ရှင်မှားသွားပြန်ပြီ…အစက ဒီလူက ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာသူလို့ထင်တာ..
ကုလားသုံးကောင်ကို ဥပဒေအရ အရေးမယူခိုင်းဘဲ ရခိုင်များက ဟိုရခိုင်ညီမလေးကို မုဒိန်းကျင့်လို့ သတ်ကွာဆိုပြီး အားပေးထားပါလား…ဒါဆိုရင် ကုလားဆယ်ကောင်ကို သတ်တာနဲ့ဘာထူးတုန်း..
ကိုယ့်လူအပေါ်က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပြီး နောက်ဆုံးကျတော့လည်း
ဆိတ်လစိမှန်း သိလိုက်ရတာပဲ…ဘယ့်နှယ့်ကွာ ဗလောင်းဗလဲနဲ့ပါလား.
Hello marbelcomment….. ဘယ်မှာလဲဗျာ ဥပဒေ ကျွန်တော့်ပို့စ်ထဲမှာ ဥပဒေနဲ့ပက်သတ်ပြီး ဘာများဝေ
ဖန်ထားလို့ ဝင်ညှော်တာလဲသိပါရစေခင်ဗျာ။ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး Just read at the first paragraph…
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကိုယ်ခံစားချက်ကိုတင်တာ လို့ အတိလင်းပြောပြီးသားပါ။
ပာုတ်တယ်နော်……ကိုယ့်လူ ကျုပ် ဘာမှဗလောင်းဗလဲနဲ့မလုပ်ထားဘူးပာုတ်တယ်နော်……….
ကျုပ်ပာာကျုပ် အဲ့ဒီကုလားသုံးကောင်ကိုသတ်ချင်လို့ သတ်ရင်တောင်အားပေးတယ်လို့ Personal Emotion ကို express လုပ်တာကိုယ့်လူ မကျေနပ်……Sorry ပဲ။
မဆိုင်တဲ့ ကုလားဆယ်ကောင်ကို သွားလုပ်တာ Unfair ပာုတ်တယ်နော် ပာုတ်မပာုတ်သိချင်ရင်
ခင်ဗျားတို့နားက နှာချည်း တွဲလောင်းနဲ့ ခလေးတွေးကိုသွားမေးလိုက် ကိုယ့် Personal Emotion ကိုကိုယ်
ပြော တာ တရားနည်းလမ်းကျတာတွေ မကျတာတွေ စကားကြီးစကားကျယ်တွေတစ်ခုမှမပြောသွားဘူး။
ဆိတ်လစိတွေ…ဘာတွေညာတွေညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း အောက်တန်းစား စကားလုံးသုံးတဲ့ကောင်တွေအတွက် ကျုပ်ပို့စ်ရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာဖြေရှင်းချက်ပါပြီးသား ပါကိုယ့်လူ
ဒါပေမဲ့ လူမျိုးတစ်မျိုးကို ရည်ရွယ်ပြီး ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားက
နောက်တစ်ခု ဆိတ်လစိ လို့ ပြောလို့ပြောတာကို အောက်တန်းစားလို့
ခင်ဗျား သုံးတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျား ဟာ တိုင်းပြည်ဖခင်ကိုလည်း
ha ha ha .guy u ought to understand different between independence father and you.
right? But it’s so funny when I saw your comment.Any way thanks for your comment.
But next time, you need to care differences between sky and ground.
Empire speech and villager speech is not same.The villager can’t be empire
by using empire’s speech.
မောင်ကောင်း ကို says:
ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမနဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့ရဲ့ စကားဆိုရင် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာ နားထောင်လိုက်ပါဗျာ။ စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ဖက်စလုံး အထိနာကြတာပါပဲ။ ခံရတဲ့ ဘက်ကရော ၊ နိုင်တဲ့ဘက်ကရော အားလုံးအရှုံးကြီးပါဘဲ။ သမ္မတကြီးပြောသလို သတိတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ၊ အသိတရားနဲ့ မေတ္တာတရား ထားပြီးဆောင်ရွက်ကြ ရင်ပိုကောင်းပါတယ်လို့။ပြောတာ ပြောရတယ်။ ရင်ထဲမှာတော့ ကလိ ကလိနဲ့ဗျ။
Dear Wai Phyoe., ငါ့ညီက လွှဲပြီးရင်းလွှဲနေတာပါ၊ အကိုက ဒီဂေဇက်မှာဘယ်သူကိုမှ မခွဲခြားတက်ပါဘူး၊ဂျူနီယာတွေ စီနီယာတွေဆိုတာ မိမိဘာသာမိမိ သတ်မှတ်ချက်တွေပါ၊ငါ့ညီ အနေနဲ့ အကို့ကို တောင်းပန်ဖို့လည်းမလိုပါဘူး၊ငါ့ညီအနေနဲ့ အမှားကိုသိပြီး၊အမှန်ကိုမြင်ရင်ပြီးတာပါပဲ…ဒို့တစ်တွေက ရန်သူတွေမှ မဟုတ်တာ၊Masuk တာ မလေးဘာသာအရ အဝင် လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်၊ဓါတ်ပုံထဲမှာ Shell ဓါတ်ဆီဆိုင် အဝင် သို့ လမ်းညွန်ထားတာပါ၊